Maamulka Puntland Oo Ka Laabtay Go'aankii Ay Ku Xidhaysay Masaajidyada - Borama News Network %
Maamulka Puntland Oo Ka Laabtay Go’aankii Ay Ku Xidhaysay Masaajidyada
Maamulka Puntland ayaa shaaca ka qaadey in uu ka laabtey Amar ay horey u soo saareen oo ahaa in la xiro dhamaan masaaajidda iyo dugsiyada Qur’aanka, si looga fogaado faafidda Cudurka Coronavirus.
Tallaabadaan ayaa ka dambeysay,kadib markii Wasiirka Cadaaladda Puntland Cawil Sheekh Xaamud oo kulan xasaasi ahaa la qaatey Culimada Masaajida,isaga oo u sheegay inay qafiifiyeen go’aankii ahaa in la xiro Masaajida.
Wasiirka oo Warbaahinta la hadley ayaa waxaa uu sheegay inay go’aan ku gaareen iyaga iyo culimadda in Masaajida ay furnaadaan,hayeeshee la xiro musqulaha iyo qeybta weesada ee Masaajidda lana ilaaliyo nadaafadda.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa intaasi ku darey in go’aankaan aan wax iska bedeli doonin hadii aan kiis ku saabsan Cudurka coronavirus laga helin Gudaha deegaannada puntland,waxaana uu Culimada ugu baaqey inay kaalintooda ka qataan ka hortaga Cudurka Coronavirus.
Warar horey u soo baxey ayaa waxaa ay sheegayeen in inta badan Culimada ku nool deegaannada Puntland ay ka biyo diideen go’aankii Wasiirka Cadaaladda Puntland ee ahaa in la xiro Masaajidda,taas oo keentay in uu la kulmo.
Dowlada Somaliya War Ka Soo Saartay Duulimaayada Ay Ethiopia Airline Ku Timaado Magaalada Hargaysa
Galka Baadhista :- Faafitaanka Coronavirus Iyo Qaabkii Uu Shiinuhu Ugu Gaashaamteen Faafitaanka Cudurkaasi
Gudoomiye Waraabe:- Beesha Caalamku Waxay Noo Sheegeen In Madaxwaynuhu Dhamaynayo Arinta Koomishanka
Bnnstaff Bnnstaff February 2, 2020
Hadhaaaga Sigaar La Isticmaalay Oo Sobobay In La Soo Qabto Eedaysane La Raadinayay 35 Sano
Bnnstaff Bnnstaff March 22, 2020
Dowlada Somaliya Oo Ku Hawlan Soo Daynta Muwaadiniin Somaliyeed Oo Ku Xidhan Sucuudiga